Design Senior II Isiqophi mina - Electronics Design Ukukhiqiza
Senior Design II – Ithimba 3 Kubonakala Ukuxhumana Khanyisa – isiqophi 1
Uma kuziwa amabhodi ukuthuthukiswa, akusiwona nje mayelana Arduino futhi okusajingijolo Pi. I BeagleBone TI-friendly lapho ukuxubana, kakhulu, belwela ukugxilisa ingqondo
Yikuphi esizwakalayo sikhangise ezinye zezenzakalo ezenzeka emhlabeni BeagleBone Black PC owodwa ebhodini: kukhona inguqulo entsha kanye capes ezimbili ezintsha kusukela ithimba BeagleBone.
Kanye BeagleBone Black Wireless (phansi ngezansi), uzophinda uthole ezimbili olusha sha 'izimpawulo' add-on amapulangwe zamanje BeagleBone Black.
Ukuze uqale nge BeagleBone Black Wireless, okuyinto ebalulekile eyaba BeagleBone Black ne on-ebhodini 802.11 b / g / n 2.4GHz-Wi-Fi plus-Bluetooth. It elandelayo umzila Raspberry Pi 3 ngokwakha Wi-Fi ukusekela ukwenza ukuxhumana okungenantambo okulula.
"Ngendlela engangizizwa ngayo BeagleBone Black, wireless elondoloza-HDMI okukhipha, serial kokulungisa amaphutha port, Lwekhompyutha ye-USB esibonakalayo, -USB 2.0 aphethe, kabusha namandla ukushintshwa, futhi unezela isimo esengeziwe Kwaholela izinkanyiso ezimbili-Wi-Fi ne-Bluetooth,"Lichaza BeagleBone.org.
"Ngokufanayo walondoloza is the 4GB ebhodini eMMC ngohlelo Debian Linux preinstalled, elivumela BeagleBone Wireless Boot cishe 10 imizuzwana futhi uke ekuthuthukiseni ngokusebenzisa isiphequluli sewebhu ku imiz Five kuphela sika esebenzisa kuphela eyodwa ye-USB. "
Uzothola imininingwane ebhodini ukhulisa isithombe kulesi sihloko, futhi ishidi idatha khona lapha ukuze alandwe.
Qaphela ukuthi uphawula ukwethulwa Octavo OSD3358 SIP, zokuhlanganisa BeagleBone nokusebenza kwelinye iphakethe BGA.
Hlola izici zayo kanye nezimbi kusukela kule oxhumano http://mouser.com/new/octavo-systems/octavo-systems-osd335-sip/
Uma ucabangela siyakucela ukuvala umlomo ngayo ebhange ikhadi-osayizi peices ka ikhithi, isikhala kumele yenziwe izici ezintsha. It is okusho lokhu BeagleBone ethile ilahlekelwe yayo 10/100 i-Ethernet port, esikhiqiza isikhala okwesikhathi TI WL1835 WiLink Wi-Fi esibonakalayo.
:: 4GB Uxhumano eMMC Flash ne Debian Linux Distro pre-efakwe
Khumbula entsha Wireless Cape kuthatha BeagleBone Black ngenhla izici BeagleBone Black Wireless, kusikisela Steve Bush kuzindaba wakhe ucezu kukhululwe. Isebenzisa Texas Instruments WiLink 8 (WL1837) zezimboni-dual-band (2.4GHz & 5GHz), 2× 2 MIMO-Wi-Fi, I-Bluetooth ne-Bluetooth Smart (Abizwa nangokuthi ama-Bluetooth LE), esesikhundleni ngokulinganayo Zigbee kanye NFC.
ICape iza Debian Linux Distro pre-efakwe futhi 4Gbyte on-umkhumbi eMMC Flash inkumbulo. "Abaklami Creative kungenzeka akha kuqashwa isiphequluli zabo kuwebhu ngaphansana Five imiz ngokusebenzisa esisodwa ikhebula le-USB,"Kusho Farnell.
Isaziso kukhona omunye Khombisa izimpawulo Addon sizikhandle itholakala. Iqukethe uxhumano okwesikhathi 4.3″ umbala isikrini sokuthinta i kwasemuva LED futhi Imbondela capacitive "ngoba esibonakalayo kwihendisethi-like".
ICape igxile amaphrojekthi interactive, izinhlelo ashumekiwe ahlukene isethi ups.
Intengo emhlabeni £ 55 ukuze BeagleBone Black Wireless, £ 35 ukuze Addon isibonisi izimpawulo futhi £ 44 for wireless izimpawulo Addon .
I-oda Amazon . nge